Nepal Dayari | अर्कै पुरुषसग भागेकि श्रीमती भेटिएपछी श्रीमानलाई कुटेर पुन फरार,(भिडियो हेर्नुस)
अर्कै पुरुषसग भागेकि श्रीमती भेटिएपछी श्रीमानलाई कुटेर पुन फरार,(भिडियो हेर्नुस)
पुष ११, २०७८ आइतबार १४० पटक हेरिएको
अर्कै पुरुषसग भा’गेकि श्रीमती भेटिएपछी श्रीमानलाई कु’टेर पुन फ’रार,(भिडियो हेर्नुस)
केही दिन अघिको मात्र कुरा हो काठमाडौंको कलङ्किमा बसोबास गर्दै आएका भिमबहादुर तामाङ नाम गरेका एक पुरुषको उर्मिला तामाङ नाम गरेकि श्रीमती एक पुरुषसग फ”रार भएकी थिइन । तीन छोराछोरी र श्रीमानको बि”चल्ली बनाएर आफ्नै श्रीमानको कामदारसग भा”गेकि थिइन उर्मिला । श्रीमतीले यसो गरिदिदा यता भिमबहादुर म’र्नु न बाच्नु भएका छन भने उनका छोराछोरीहरु टु’हुरा भएका छ्न ।
रोहन तामाङ नाम गरेका उक्त पुरुष जो भिमबहादुरकै कामदारको रुपमा काम गर्थ्यो उसैले नै आफ्नी श्रीमती भ”गाउदा यता भिमबहादुर भने मर्नु न बाच्नु भएका छ्न । ठेक्कापट्टाको काम गर्ने भिमबहादुरले आफ्नै कामदारसग नै श्रीमतीले यसो गर्ली भनेर सोच्दा पनि नसोचेको शं”का गर्ने त ठाउँ नै नरहेको बताएका थिए ।
क”ठै ब”रा ती सानी छोरिले रुदै ममिलाइ छिटो आउनु भन्दै अनुरोध गरिन । भाइहरु सधै ममि कहिले आउने भन्दै रु”न्छ्न भन्छिन उनि । कस्ती क”ठोर महिला कसरी छोडेर जान सकेकीहोलिन यति साना बच्चाहरुलाइ ? श्रीमानले पनि थाम्न सकेनन आँ”सु निकै नै पि”डामा रहेछ्न उनी । रु”दै रु”दै छोराछोरीको लागि भएपनि आउन बि”न्ती बिसाए उनले श्रीमतीलाइ ।
श्रीमतीले जहिले गा”ली गर्ने गरेतापनी कहिलेको दिनमा हात नहालेको र केही गर्दा पनि सामान्य गा”ली गरेको बताउछन उनी । आफुसग नबस्ने हुदा पनि बच्चाहरुसग भने बसिदिओस भन्ने उनको चाहना रहेको छ र आफू फाल्टै बस्न तयार रहेको र रासनपानी पनि आफैले दिने बताउछ्न उनी ।
श्रीमतीलाइ नसम्झाएका पनि हैनन भिमबहादुरले तर श्रीमतीले बुझन नै नचाहेपछि उनको के नै लाग्छ र ? खाना लिएर आउदैछु भनेकि श्रीमती उतैबाट भा”गेकि रहिछिन । श्रीमती भा”गेपछि रोहनकै घरमा समेत पुगेका रहेछ्न उनले । उनले श्रीमतीलाई आउन अनुरोध पनि गरेछ्न तर तर श्रीमतीले छोराछोरी र उनको केही वास्ता नभएको र रोहनसग नछुट्टिने बताएकी रहिछिन । आधाबाटो सम्म त फ”काएर ल्याएछ्न पनि तर उनलाइ नै ढुङ्गामुढा गरेर भा”गेपछि भने उनको केही जोर चलेनछ ।
यसैक्रममा आज भने उनै फ”रार उर्मिलाका भाइ मिडियामा आएका छ्न । कसैसग मज्जाले बोल्दा पनि नबोल्ने दिदिले यसो गर्लि भनेर सपनामा पनि नसोचेको बताउछ्न उनी । भिनाजुले दिदिलाइ असाध्यै माया गर्ने गरेको र आफ्नो परिवारसग सानो झ”गडा पर्दा पनि दिदिकै खुसीको लागि भनेर भिनाजुले आफ्नो परिवार नै त्यागेको बताउछ्न उनी । भान्जाभान्जि रु”दा एकदमै मन दु”ख्ने गरेको बताउछ्न उनी ।
दिदिले कु”ट्दा पनि सहने गरेको तर दिदिलाइ भने केही भन्ने नगरेको बताउछ्न उनी । आफुले पनि दिदीलाई फोन गरेर आउन अनुरोध गरेको तर दिदी नआएको बताउछ्न उनी । भिनाजुले अझैपनी स्विकार्न तयार रहेको र जहाँ भएपनी छोराछोरी सम्झेर भएपनी घर फर्किन अनुरोध गरे उनले दिदी भगाउने रोहनलाई यी नानिहरुको पि”डालाइ आफ्नै सम्झेर बुझिदिन अनुरोध गरे । यो कुरामा सरासर आफ्नै दिदिको ग”ल्ती रहेको बताउछ्न उनी ।